Boky Nazi Alemana
Teny alemà Nazi Alemana - Adolf Hitler
Teny alemà Nazi Alemana - nanjakan'ny Nazi tany am-boalohany
Nazi Germany crossword - fiainana sy asa
Teny alemà Nazi Alemana - niandohan'ny Nazism
Nazi Alemanina ambongadiny - politikam-pirazanana
Nazi Alemanina mpandika teny - lalana mankany amin'ny ady
Fitambaran'entana Nazi Alemana - ny Repoblika Weimar
Baibolin'i Nazi Alemana
Anton'ny Nazi Alemana
Nazi Germany fanontaniana momba ny essay
Fanadihadiana momba ny fahatsiarovana Nazi Alemana - tarehin'ny anti-Nazi
Fanadihadiana momba ny Nazia Alemania - hetsika 1918-23
Fanadihadiana momba ny Nazia Alemania - hetsika 1924-32
Fanadihadiana momba ny Nazia Alemania - hetsika 1933-39
Nazi Alemanà fizarana fahatsiarovana - vondrona
Nazi Alemanà fizarana fahatsiarovana - hevitra
Nazi Alemanà fizarana fahatsiarovana - mpitarika
Nazi Alemanà fizahana fizahana - teny sy hevitra (I)
Nazi Alemanà fizahana fitadidiana - teny sy hevitra (II)
Namela ny fahatsiarovana an'i Nazi Alemana
Nazi Alemà quiz - politika ara-toekarena
Nizarana Nazia Alemana - Hitler
Nazi Germany quiz - fiainana ary miasa
Nizaran'ny Nazia Alemà - politikam-pirazanana
Nizeri-toetra Nazi Alemana - ny fanjakana Nazi
Nizaran'ny Nazia Alemana - ny NSDAP
Nizeriana Alemanina Alemania - lalana mankany amin'ny ady
Nizarana Nazia Alemana - ny Repoblika Weimar
Ny Nazi Alemana dia manontany
Lohahevitra Nazi Alemana
Nazi Alemana izay iza
Tenim-pirenena Nazi Alemana - hevitra
Tenim-pirenena Nazi Alemana - olona
Tenim-pirenena Nazi Alemana - toerana
Teny alemà Nazi Alemana
Ny tantaran'ny Alemaina Nazi nahavariana olona sy an-tapitrisany maro no gaga. Nanomboka tamin'ny tsy fahombiazan'ny Repoblika Weimar ary nifarana tamin'ny horohoro tamin'ny Ady Lehibe Faharoa sy ny Famonoana Tambabe. Teo anelanelan'izany, ny Nazism dia nisy fiantraikany tamin'ny olona an-tapitrisany ary nanova ny fandehan'ny tantara maoderina.
Ny Nazi ireo vondrona nasionalista radikaly izay namorona ny antoko politika azy manokana ao 1919. Notarihin'i Adolf Hitler, orinasa iray taloha niasa tamin'ny Ady Lehibe I, ny antoko Nazi dia nijanona kely ary tsy nahomby tamin'ny ankamaroan'ny 1920.
Ny fiandohan'ny lehibe fahakiviana ary ny fiantraikany mampalahelo an'i Aleman dia nahita an'i Hitler sy ny Nazis nahazo fanohanana bebe kokoa. Ny Nazi dia nanolotra ny tenany ho safidy vaovao sy safidy ho an'ny vahoaka Aleman'ireo mamoy fo. Tsy dia nahalala firy momba an'i Hitler sy ny Nazi. Ny ankamaroan'izy ireo dia ny herin'ny fanjakana, ny fanapahana an-tsoratra, ny fanindrahindram-pirenena fanatanjahantena, ny Darwinisme sosialy, ny fahadiovan'ny firazanana, ny famonoana miaramila ary ny fandreseny - dia ny hevitry ny taloha, fa tsy ho avy.
Ny 1930 dia nanjary fety lehibe indrindra tany Alemana ny Nazi Reichstag (Parlemanta). Io fanohanana io dia nandray anjara tamin'ny ny fanendrena an'i Adolf Hitler ho mpiadidy tamin'ny Janoary 1933.
Hitler nandritra ny folo taona mahery i Hitler sy ny mpanara-dia azy fa lalina kosa ny fiantraikan'izy ireo tany Alemana. Tao anatin'ny roa taona, matin'ny demokrasia ny demokrasia ary namorona fanjakana totalitista tokana.
Ny fiainana an-tapitrisany maro no novaina, ny sasany ho tsara kokoa, ny maro kosa no miharatsy. vehivavy namboarina an-trano ary navahana tao amin'ny politika sy ny toeram-piasana. Ankizy nohatonina tamin'ny hevitra sy ny lanjan'ny Nazism. Niova ny sekoly sy ny toeram-piasana mba hanatanterahana ny tanjon'ny Nazi. Vondron'olona ara-tsosialy na manelingelina - avy Jiosy ny marary saina - voavaha na nesorina.
Nandà an'izao tontolo izao koa ny Nazia mamelona indray ny tafika miaramila izay nitondra an'i Alemaina ho amin'ny Ady Lehibe I roa taona lasa izay. Ary farany, tao amin'ny 1930 farany, dia nitady ny hanitatra ny faritany Alemanina, politika izay niteraka ady farany farany teo amin'ny tantaran'ny olombelona.
Ny tranokalan'i Alfa avy any Almania Alpha dia loharanom-pahalalàna boky momba ny kalitao feno indrindra amin'ny fandalinana ny fiakaran'ny Nazi sy Alemana eo anelanelan'ny 1933 sy 1939. Mirakitra loharanom-pahalalana an-jatony sy ambaratonga an-jatony samihafa, misy ny antsipiriany famintinana lohahevitra ary antontan-taratasy. Ny tranokalanay dia misy ihany koa ny fanazavana momba ny Tantara amin'ny, glossaries, 'iza iza' ary fampahalalana momba historiography. Ny mpianatra dia afaka manandrana ihany koa ny fahalalany ary mampatsiahy azy ireo amin'ny hetsika an-tserasera marobe, anisan'izany Quizzes, crosswords ary wordsearches. Ny loharanom-bokin'ny Kilonga, ny votoatiny rehetra ao amin'ny History History dia nosoratan'ireo mpampianatra, mpanoratra ary mpahay tantara za-draharaha.
Ny ady tany Vietnam